Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ọnwụnwa Ọhụrụ maka ndị ọrịa nwere COPD
Nuvaira, onye mepụtara usoro ọgwụgwọ ọhụụ iji gwọọ ọrịa ngụgụ na-egbochi, kwupụtara usoro ọgwụgwọ abụọ dị mkpa. A na-agwọ ndị ọrịa 200 na AIRFLOW-3 nnwale dị mkpa, nke mbụ na-etinye aka na COPD iji kwado mbelata na COPD exacerbations dị ka isi njedebe. Gburugburu ụwa, ndị ọrịa 300 anatala ọgwụgwọ dNerva® Targeted Lung Denervation (TLD) n'ofe ule ụlọ ọgwụ ise.
dNerva® TLD bụ usoro bronchoscopic nke na-akpaghasị ntinye akwara pulmonary na ngụgụ iji belata nsonaazụ ụlọ ọgwụ nke hyperactivity akwara. N'iji usoro dị ka anticholinergics (klas isi nke ọgwụ COPD) nke a na-ewere kwa ụbọchị iji jikwaa mgbaàmà, usoro dNerva nke otu oge nwere ike ibelata ihe egwu dị njọ, melite mgbaàmà, na ịkwado ọrụ ngụgụ.
Ọgwụgwọ dNerva TLD 300 mere n'ọnwa a. Dr. Gerard Criner, Onye isi oche na Prọfesọ, Thoracic Medicine and Surgery na Lewis Katz School of Medicine na Temple University emesowo ndị ọrịa 20 na ule AIRFLOW-3. "Ọ bụrụ na anyị nwere ike inyere ndị ọrịa aka ime ka mgbaàmà COPD ha guzosie ike ma wepụ ha n'ụlọ ọgwụ, nke ahụ ga-abara ndị ọrịa, ndị na-elekọta ha uru, ma belata ibu na usoro nlekọta ahụike" ka o kwuru. Mwakpo COPD na-anọchi anya ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta ọnụ ahịa nlekọta COPD, nke e mere atụmatụ na $49B kwa afọ na US
Ọnwa a na-egosikwa usoro ọgwụgwọ dị oke mkpa na nnwale AIRFLOW-3. Prọfesọ Pallav Shah, Dọkịta Ndụmọdụ na Chelsea & Westminster na Royal Brompton Hospitals na London na Prọfesọ nke Respiratory Medicine na Imperial College bụ onye na-edebanye aha na nnwale ahụ. Ọ rụrụ usoro 200th AIRFLOW-3 na onye ọrịa nwere COPD na-agafeghị oke na oke ibu, ibu mgbaàmà dị elu, na akụkọ ihe mere eme nke COPD na-emewanyewanye n'agbanyeghị nlekọta ahụike kachasị mma. "Ọtụtụ ndị ọrịa COPD na-ata ahụhụ site na ndụ adịghị mma n'ihi mmejọ COPD ugboro ugboro" ka o kwuru. "Nnwale AIRFLOW-3 bụ ohere na-akpali akpali iji nyochaa usoro nlegharị anya otu oge nke nwere ike ibelata mmekpa ahụ COPD ma melite nkwụsi ike ụlọ ọgwụ."
Ụlọ ọrụ ahụ na Innovatus Capital Partners LLC nwetara ntinye ego $50 nde ọzọ nke ụgwọ yana ego nha anya n'oge na-adịbeghị anya, nke a ga-eji mezuo ule AIRFLOW-3 wee nweta nkwado US FDA.
Ọzọ na: London | Company | Medicine
Ọmụma Ahụike Mba: Ọdịmma Ọrịa Ọrịa Na-ebute na-ebuli ihe egwu ahụike obi Medicine|
Nchịkọta Set na-esonyere Global Hotel Alliance London|
Company London Medicine
Igodo Ọhụrụ ọgwụ mgbochi ọrịa shuga
Ngwa ngwa nyocha nchọpụta ọmụmụ tupu oge aga na-akụ...
Ndị agha ndị agha America rịgoro n'Ugwu Kilimanjaro ka…
Na-awụ akpata oyi! Ụwa Surreal nke Elsa Schiaparelli ...
Angela Downey ekwu, sị:
Jenụwarị 26, 2022 na 12:42
A bụ m ihe akaebe na-egosi na ị nwere ike ibi ntụsara ahụ na COPD. Enwere m emphysema, mana emphysema enweghị m. Mgbe ọtụtụ afọ nke ndụ na-adịghị ala ala obstructive pulmonary ọrịa (COPD). A gwọrọ m COPD ndammana site na iji World Rehabilitate Clinic Herbal formula, N'ime oge nke 3 izu m na-agbake. N'afọ 2021, amalitere m iji usoro ọgwụgwọ ụlọ ọgwụ ụwa Rehabilitate. Ha bụ ọkachamara n'ịgwọ ọrịa ime na akpa ume. Ọ dịkwa oke mkpa ịmụta ihe niile ị nwere ike gbasara nyocha gị. Chọọ nleta nhọrọ (worldrehalitateclinic. com.